नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता::KhojOnline.com
काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बस्नुअघि शीर्ष नेताहरुले बिरुवा रोपेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रुपमा बिरुवा रोपेर पानी हालेका हुन् । एमाले र माओवादीका अरु नेताहरुले पनि यसैगरी बिरुवा रोपेका छन् ।
कपूर, समी, आँप, अम्बा लगायतका बिरुवा रोपिएको हो । तर प्रचण्डले रोपेको बिरुवाको नाम कसैले जानेनन । प्रचण्ड सोधे के को बिरुवा हो ?
एकजना भन्दैथिए – जापानको बिरुवा हो सर, नाम त थाहा छैन ।
प्रचण्डले फेरि सोधे– यो कत्रो हुन्छ ? यसले छहारी दिन्छ ?
प्रचण्डको प्रश्नपछि अनि सबै गलल हाँसे । बास्तवमा त्यो बिरुवा के को हो र कत्रो हुन्छ तथा के फल दिन्छ भन्नेमा सबै अनबिज्ञ थिए ।
टोखा नपा जुवाडेको हब बन्दै,टोखाबाट पाँच लाख नगदसहित १५ जुवाडे पक्राउ
माघ, काठमाडौं । महाराजगञ्जस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तले रु पाँच लाख ३५ हजार ८४०सहित १५ जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ । वृत्तअन्तर्गत महानगरीय प्रहरी वृत्त गोँगबुका प्रमुख मोहनविक्रम केसीको नेतृत्वमा खटेको टोलीले टोखा नगरपालिका–१० गणेशस्थानस्थित लोकबहादुर गुरुङको कोठामा छ थान ताससहित बुधबार राति ९ बजे पक्राउ गरेको हो...
१६ औं पटक अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीकै विरुद्ध अर्का एकजना अनसन
इलाम । आफ्ना मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरको विरोधमा १६ औं पटक अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीकै विरुद्ध अर्का एकजना अनसन बसेकाछन् । इलाममा अनसनरत डा. केसीविरुद्ध खोटाङका विजय थापाले शुक्रबारबाट अनशन शुरु गरेका हुन् । केसीले संसदीय समितिबाट पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोध गरेका छन् भने थापाले...
पुस, काठमाडौं । तत्कालिन राजा वीरेन्द्रको औपचारिक भ्रमणपछि रोकिएको नेपाल र फ्रान्सबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण यो वर्ष सम्भव होला ? नेपाल र फ्रान्सबीच दौंत्य सम्बन्ध स्थापित भएको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा यो प्रश्नको पनि समाधान खोज्दैछन् दुवै देशका उच्च अधिकारीहरु । बुधवार यसैबारेमा दुवै देशका सचिवहरुबीच औपचारिक...
पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नेपाल पानी जहाज कार्यालय’ स्थापनाको तयारी भइरहेको बताएका छन् । आइतबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले रेल र पानी जहाजको आफ्नो सपनालाई अफवाहको तुवालोमा पुर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘कागजको डुंगा फ्याकियो, गुडिया रेल खेलाइयो । अहिले साथीहरुले...
बौध्द पुलिस चौकी अगाडी बेवारिसे लास भेटिको छ / हाम्रा खोज सम्बादाता अरुण तामाङ्गका अनुसार बौध्द प्रहरी चौकी नजिकै तिब्बेतियन होटेलको आगाडी उक्त लास भेटिएको हो / हालसम्म पनि लास कसको हो पत्ता लगाउन सकेको छैन /प्रहरीद्वारा अनुसन्धान भैरहेको जनाएको छ /प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार...
सामुदायिक सेवा केन्द्र ,गोंगबुको मतदान सकिएको छ
सामुदायिक सेवा केन्द्र ,गोंगबुको मतदान सकिएको छ / मतदान अधिकृत उपेन्द्र नरसिह केसीले जानकारी गराउनु भए अनुसार कुल मतदाता ११७५ मा ९८४ मत खसेको जनाएको छ / अहिले आठ बजेबाट मतदान गणना गरिने जानकारी दिएका छन /झन्डै ८४ प्रतिशत मतदान गरेका थिए /निर्वाचन अति सौहार्द...